Haweeney Maal-Qabeen Ah Oo La Ogaaday Sabab La-Yaab Leh Oo Ay U Dawarsato Iyo Xaddiga Hantideeda | Hangool News
Haweeney Maal-Qabeen Ah Oo La Ogaaday Sabab La-Yaab Leh Oo Ay U Dawarsato Iyo Xaddiga Hantideeda
December 1, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangzhou, December 01, 2018- (Foore)- Haweeney 79-jir ah oo waqtigeeda ugu badan ku qaadata inay ka dawarsato Istaamada Tereenada iyo gawaadhida ee magaalada Hangzhou, ee dalka Shiinaha ayaa dhawaan la ogaaday inay ahayd maal-qabeen howl-gab ah taas oo kasoo kacda Guri fiilo ah oo waliba shan Dabaq ah lehna dhowr bakhaar oo qaarkood kiro loogu jiro.
Warka haweeneydan ayaa qabsaday guud ahaanba dalka Shiinaha kaddib markii taliska sal-dhiga booliska Istaanka Tareenka ka howl-gala ay codbaahiyaha ku sheegeen farriin lala yaabay oo ah inaan lagu kadsoomin haweeneydan oo aan loo maleynin darbi-jiif. Waayo sida ay u muuqato uma aha mid sabool ah.
Layaabku wuxuu kasii daray markii wiilkeedu uu shaaciyay inay yihiin qoys nolol ahaan hodan ah oo hanti maguurto ah oo ka badan heysta – isaguna uu maareeye ka yahay mid kamid ah warshadaha qoyskoodu leeyahay.
Wuxuu sheegay in tiroba dhowr jeer uu hooyadii u sheegay inaanay dawarsanin. Balse way ku gacan-seydhay.
“Waan u sheegay in haddii aanay sumcadeeda ilaashaneyn – annagu aan ilaashaneyno,” ayuu yidhi. “Waxaan subax walba siiyaa cunno nafaqo leh, waxayse ku adkeysataa inay u baxdo dawarsi. In badan oo dadkan kamid ah way ka qanisan tahay. Waxayna leedahay keyd bangi oo lacageed.”
Haweeneydan 79-jirka ah waxay markii hore halkan u timid inay iibiso qaaradaha. Balse markii boolisku amray inaanay halkan ku ganacsan, waxay bilwoday inay ku dawarsato. Waxay subax walba 10:00 barqanimo timaaddaa Istaannada tareenada laga raaco agtooda ee saxmadda badan – iyada oo ka tagta habeenkii fiidka hore. Marka loo eego ilaha qaar, maalin walba waxaa soo gala lacag dhan 300 yuan. Dadaal lagu doonayo in lagaga joojiyo dawarsiga, wiilkeeda ayaa sawirradeeda ku baahiyay dhammaanba aagga istaannada baabuurta iyo tareenada iyo waliba baraha bulshada – isaga oo dadka u sheegaya inaanay siin wax lacag ah haddii ay arkaan.
Balse taasi uma shaqeynin siduu rabay. Hadda shaqaalaha istaammada ayaa xaaladda soo fara-geliyay. Waxayna codbaahiyaha ugu sheegayaan dadka inaanay siinin wax lacag ah haweeneydan. “Haweeneydani way ladan tahay. Haku sirmina. Hana iska siinina lacagihiinna,” ayaa laga maqlayaa cod-baahiyaha.
Sheekada haweeneydan ayaa dhalisay dood adag. Halka dadka qaar ay ku dhaleeceeyeen khiyaanada ay ku heysto dadka danyarta, qaar kale ayaa eedda dusha uga tuuray wiilkeeda – iyaga oo ku tilmaamay mid gabay inuu waqti fiican la qaato daryeelka hooyadii. Taasina ay ku xanbaartay inay bannaanka usoo dawarsato.
Wiilka ayaa iska diiday eedeymaha – isaga oo sheegay inaanay maan-gal aheyn waqti walba in indhaha lagu hayo waalidka maadaama uu shaqadiisa u degdegayo. Haweeneyda oo waraysi lala yeeshay ayaa sheegtay inaanay jecleyn inay kaligeed iska joogto guriga maalintii oo dhan. Taas beddelkeedana ay ka doorbidayso inay dawarsato si lacagta ay ka hesho ay ugu kiraysato qof daryeela marka ay sii gabowdo. Balse kawaran lacagta tira badan oo wiilkeedu ku sheegay inay ugu jirto koontada bangiga?